Ihe okike 5 Nkwupụta Sep-28-2020
Ezigbo ndị na-agụ akwụkwọ, anyị kwurịtara banyere ngalaba imepụta iji chịkwaa ebu ọrụ nrụrụ n'isiokwu ikpeazụ (Otu esi ejikwa nrụrụ nke ikuku & akụkụ mmiri? -Design), mana inwe ezigbo atụmatụ bụ mbido ， anyị chọkwara ime a otutu mgbanwe ọrụ ịgbanwe akụkụ dị ka n'ezie ebu ikpe N'ihi. Dị ka ị maara, akụkụ dị iche iche nwere jiometrị dị iche iche, ya mere ọnọdụ dị iche iche kwesịrị ịkpụzi ngwọta dị iche iche. ok, biko soro m mara ihe anyi ga eme.
General na-ekwu okwu, ejikari anyị mkpa 4 ugboro ebu ikpe na-ebu ebu njikere maka Buy-apụ, na bụla ikpe nwere ya ọrụ na-eme ebu zuru.
T0 tryout bụ anyị otu ime ihe iji lelee ebu ọrụ, ma nyochaa nsonaazụ nke pre-deformation anyị mepụtara ma ọ bụ mee na ebu ziri ezi ma ọ bụ na ọ bụghị.
Inweta data nke akụkụ n'ezie deformation (Isi ọgwụgwụ elu, tube orifice, kwesịrị ekwesị oghere, nzukọ nkechi…)
Gbalịa ịchọta okwu niile banyere ebu, n'agbanyeghị ihe doro anya ma ọ bụ zoro ezo ， dịka ọmụmaatụ: mmeghe / mmechi mmechi, omume ịkpụzi ebu, ihe eji ejuputa ihe dị iche, akụkụ nke de-akpụzi, ọkụ ọkụ na obere mkpọtụ wdg.
Samplesnọgide na-adị n'omume na ọnọdụ okpomọkụ 24h nkịtị na ọnọdụ nnwere onwe, wee tụọ akụkụ ha (akụkụ akụkụ ahụ na-akọ naanị maka mgbanwe dị n'ime), ọkachasị ịlele mpaghara ụkwụ, dị ka ịkwụ ọtọ, ịdị larịị, ogo ụkwụ na ọkpụrụkpụ. N'ihi na ụkwụ ụkwụ mgbe niile dị ka mmesho datums. Ozugbo akụkọ ọkwa T0 dịnụ, wee gbanwee ebu dịka nke ahụ site na ịgbado ọkụ.
Banyere mgbanwe akụkụ mgbe T0 gasịrị, naanị na-eche banyere ịdị larịị, kwụ ọtọ na perpendicularity.
Maka ego T1, ndị ahịa ga - esonyere anyị maka ikpe ebu ebu. Ma anyị kwesiri ịghọta n'okpuru ebumnuche sitere na T1.
Ọkpụkpụ ọrụ na ije kwesịrị ịdị mma, a ga-ejikwa ọnọdụ ịkwa ahụ na-agba ọsọ.
Samples akụkụ kwesịrị fọrọ nke nta ka ok ụkwụ ụkwụ straightness, flatness na perpendicularity.
24 awa mgbe e mesịrị, ịlele ihe atụ (a ga-ezigara ndị ahịa akụkọ zuru oke) yana dịka nsonaazụ iji mee mgbanwe ahụ.
Dochie nro nro nke isi ntinye ka nchara siri ike. ka ọ dị ugbu a lelee akụrụngwa na akụkụ ụkpụrụ iji kwadebe ndepụta nyocha.
Na-eme ụfọdụ obere ukpụhọde banyere straightness, flatness na perpendicularity.
Na-achọ inwere ọnọdụ niile.
Ebumnuche nke T2 tryout bụ:
95% ọnọdụ akụkụ nke ọkpọkọ, brekts na clips na ndidi. Iji tụọ ihe nlele ma chọpụta ma akụkụ NG ọ bụla na-anọ.
100% kwụ ọtọ, ịdị larịị na perpendicularity nọ na ndidi.
Ihe niile adabaghị na ntinye dị n'etiti 0.1mm.
T2 n'omume ga-rubere ahịa maka ọrụ na nzukọ ule, nkwurịta okwu na ndị ahịa ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla nzaghachi si ule. Ọ bụrụ na enweghị injinịa na-agbanwe, anyị ga-agbanwezi ihe ebu ahụ ka oge.
Na-achọpụta akụkụ niile.
T3 tryout ebu ga-emecha akụkụ ya na nsogbu ya.
Ngwá ọrụ ihu ọma tryout (TA ma ọ bụ T4) ga-agba ọsọ nọgidere 2-4 awa iji nyochaa ebu ọrụ na sample àgwà. Mgbe tryout okokụre akpatre elele ebu tupu Mbupu.
N'elu bụ usoro nchịkọta nke mgbanwe nrụrụ tupu agbanwe agbanwe. nkọwa zuru ezu biko kpọtụrụ anyị site na harry@enuomold.com
Daalụ maka oge gị!